Wararka Maanta: Arbaco, Dec 4 , 2013-Maxkamad ku taal dalka Kenya oo diiday in damaanad lagu sii daayo wiilal Soomaali oo loo haysto weerarkii Westgate
Arbaco, December 04, 2013(HOL) - Maxkamad ku taalla dalka Kenya ayaa go'aamisay inaan damaanad lagu sii dayn karin wiilal Soomaali ah oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen weeraradii lagu qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate oo ay ku dhinteen dad kor u dhaafay 67 ruux.
Maxkamada ayaa sheegtay in go'aankeeda ay ku salaysay baqdin dhinaca ammaanka ah amaba in faragalin lagu sameeyo kiiska hadii damaanad lagu sii daayo wiilashan.
Eedaysanayaasha oo ah afar wiil oo dhalinyaro ah ayaa dacwad oogayaashu ku eedeeyeen inay si toos ah ugu xirnaayeen kooxihii fuliyay weerarkii Westgate oo ururka Alshabaab ay sheegteen masuuliyadiisa.
Qoysaska wiilasha loo haysto eedaymaha ayaa sheegay inaysan jirin wax lug ah oo ay ku lahaayeen weeraradaas balse lagu soo qabqabtay hawlgallo aan si aan kala sooc lahayn loogu taxaabay xabsiyada boqollaal Soomaali ah markii ay dhaceen weeraradii Westgate oo dhaliyay cadaadis ballaaran oo ay dawlada Kenya saartay Soomaalida ku dhaqan Kenya taasoo ay kamid tahay go'aanka lagu xirayo xeryaha qaxootiga ee Soomaalida.
Waa Kuwaan magacyada Wiilasha maxkamada lasoo taagay:
1: Maxamed Axmed Cabdi
2: Liibaan C/laahi
3: Xusseen Xassan
4: Cadnaan Ibraahim
Waxaana dhammaantood laga soo qabtay xaafada Islii ee Soomaalidu ku badantahay 9-kii bishii October xilligaas oo ay soo taxaabeen booliska gaarka ah ee loo tababaray la dagaallanka argagixisada.
Axmed C/samad, Hiiraan Online"